Timo Olkkonen Archives – Nehanda Radio
Mar 1, 2022 36,138
Opposition Citizens Coalition for Change (CCC) leader Nelson Chamisa says Zanu-PF is plunging the country into political instability to allow its officials to loot state coffers.
Feb 28, 2022 57,667
A Zimbabwe Republic Police (ZRP) memo has confirmed that Zanu-PF members are part of the 16 people arrested in connection with the assault and subsequent murder that took place when a Citizens Coalition for Change (CCC) rally in Kwekwe was…
Oct 26, 2021 42,761
The European Union (EU) says it is not bothered by anti-sanctions protests organised by Zanu PF adding that the restrictive measures were only brought about by human rights abuses and will only go the same way.
Sep 25, 2020 50,344
Harare magistrate Bianca Makwande has thrown MDC Alliance legislator Joanah Mamombe (27) behind bars for two weeks while her mental state is examined.
Feb 27, 2020 38,183
European Union ambassador to Zimbabwe Timo Olkkonen has said the bloc is still concerned about the January 2019 killings of protesters by the military and warned that the suspended restrictive measures on several individuals and entities…
The European Union’s Ambassador to Zimbabwe, Timo Olkkonen, says corruption is destroying the country. He said the international appeal for a couple of hundred million dollars to prevent mass starvation would have been met by only a…
Aug 28, 2019 29,249
The absence of Zimbabwe’s main opposition MDC led by Nelson Chamisa in the current political dialogue initiated by President Emmerson Mnangagwa to resolve the country’s economic and political crisis is a major handicap and will affect the…
Jul 7, 2022 50,855
Jul 6, 2022 44,143
Jul 6, 2022 19,175